Malunga Nathi-Jiangyin City Metals Products Co., Ltd.
INKAMPANI YEMETALS PRODUCTS ibonelela ngeentlobo ngeentlobo ze-aluminiyam extrusion & neeprofayili zentsimbi ezitsalwa ngokubanda ezibandakanya isiko elisemgangathweni kunye neemilo ezisemgangathweni ze-aluminium extrusion & amacandelo entsimbi ezotywe ngokubanda.Iiprofayili zethu ze-aluminium kunye nentsimbi zisetyenziswe ngokubanzi kwimimandla yemoto, amandla elanga, izakhiwo, iimoto, ukuthutha, i-aviation & aerospace, i-electronics, oomatshini kunye nezixhobo, umzila, ukuvelisa njl.
Ukukhethwa kwethu kwezinto eziphathekayo kunye noyilo kunokuhlangabezana neemfuno zamashishini ahlukeneyo kunye nokugcina abathengi bethu imali ngokunciphisa amanyathelo omatshini ngelixa uphucula isivuno kunye nemveliso.Sikwabonelela ngoluhlu lweenkonzo zokusetyenzwa kweprofayile kumava abanzi.
Ukuba ujongene nemihla ebekiweyo, masikhuphe uxinzelelo ekuthengeni kwakho.Inkonzo yethu yokumisa enye ikuvumela ukuba u-odole iiprofayili ezicwangcisiweyo kwiplanti yethu ngomnxeba omnye, ukuvumela inkonzo elungiselelwe ngakumbi, egxininisekileyo neyenzelwe umntu kunanini na ngaphambili.
Sizibophelele kwimveliso egqwesileyo kunye nomgangatho ophezulu wenkonzo yabathengi kunye nokwaneliseka.Sibakhulu ngokwaneleyo ukuba sihlangabezane neemfuno zakho kodwa sincinci ngokwaneleyo ukuba sinikezele ngomntu, ingqalelo ephendulayo oyilindeleyo kwaye uyifanele.
Iiprofayili ze-aluminium extrusion eziveliswe sithi kwiingcango, iifestile kunye neendonga zamakhethini, iipaneli zelanga, kunye neendawo ezivaliweyo zeemoto, i-heat-sinks, i-linear rails njl. zisetyenziswa ngokubanzi kwi-architecture, ukuthutha, oomatshini, iikhemikhali, i-electronics, i-marine, i-aerospace kunye nezinye iindawo.
Kwakhona sivelisa iinkangeleko zentsimbi, ingakumbi iiprofayili zentsimbi ezitsalwa ngokubanda, iimilo ezikhethekileyo, kuquka iimilo zoyilo lwesiko, umjikelo ogudileyo, isikwere, uxande, ihexagon, ityhubhu engenamthungo, ityhubhu ene-hexagonal.Amacandelo enziwe kwiindidi ezinkulu zentsimbi ezibandakanya i-carbon steels, i-alloy steels ephantsi kunye nephezulu, i-alloy steels, i-stainless steel, njl. kunye namanye amashishini.
Sinamandla anamandla kwiiprofayili ezahlukeneyo ze-aluminium extrusion kunye nemveliso yeeprofayili zentsimbi ezitsalwa ngokubanda kunye nezikhethekileyo / ezesiqhelo ze-aluminium extrusions kunye neeprofayili zentsimbi ezitsalwa ngokubanda ezinamabakala ahlukeneyo kunye nokwenziwa, unyango lobushushu, unyango lomphezulu njl njl ukwanelisa iimfuno zakho.
Inkqubo epheleleyo yetekhnoloji ingasinceda ukuba sikubonelele ngexabiso elikhuphisanayo, umgangatho ophezulu kunye nokuhanjiswa ngokukhawuleza.Siliqabane lakho elithembekileyo kwicandelo leprofayile kwaye sikuncede ukhuphisane kwinqanaba lehlabathi.